अब पञ्चपुरी नगरबासीले उपचार अभावमा मर्नु पर्दैन – SatyaPatrika
गठबन्धन सरकार बनाउन यस्ता छन् दुई विकल्प
आजको राशिफल,तपाईंको दिन शुभ रहोस्
गाउँमा कृषि ‘एम्बुलेन्स बाटै’
अब पञ्चपुरी नगरबासीले उपचार अभावमा मर्नु पर्दैन
२०७७ पुष १२, आईतवार प्रकाशित
उपेन्द्रबहादुर थापा, नगर प्रमुख, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख हुन्–उपेन्द्रबहादुर थापा । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित यो नगरपालिका साविकका पाँच गाविस (बावियाचौर, विद्यापुर, छाप्रे, सालकोट र तातापानी) मिलेर बनेको छ । थापा नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएयता यहाँका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नगरभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको काम र स्वास्थ्य योजना लगायतका विषयवस्तूमा केन्द्रीत रहेर नगर प्रमुख थापासँग सत्यपत्रिकाकर्मी चन्द्रा कँडेलले गरेको कुराकानीः
नगरवासीमा स्वास्थ्य चेतना स्तर कस्तो छ ?
अहिले कोरोना माहामारीले गर्दा जनतामा स्वाथ्य चेतना स्तर बढेको पाएको छु । पहिले भन्दा अहिले व्यक्तिगत तथा घरायसी सरसफाई, सामाजिक दुरीको पालना जस्ता कुरामा जनता सचेत छन् । पहिले बिरामी पर्दा घरमै बसेर औषधि गर्ने नागरिकहरु अहिले नजिकैको स्वाथ्य केन्द्रबाट सेवा लिइरहेका छन् । हरेक नागरिकमा आफु स्वस्थ्य हुनुपर्छ र स्वस्थ्य कसरी हुने भन्नेबारे चेतना स्तर बढेको छ । विशेष गरी कोरोना माहामारीसँगै स्वास्थ्य सचेतना बढेको पाएको छु ।
स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?
स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला पञ्चपुरी नगरपालिकाका केहि वडामा स्वास्थ्य इकाई थिएनन् । ती वडामा हाल स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेका छौं । पञ्चपुरी नगरपालिकामा स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न एक घण्टाभन्दा बढी समय नलागोस भनेर स्वास्थ्य इकाई थप गरिएको हो । सबै स्वास्थ्य इकाईमा आवश्यक जनशक्ति छन् । साविक छाप्रे गाविस भौगोलिक विकट क्षेत्र हो । जहाँ तीन वटा बस्ती थिए । दुर्गमताका कारण यहाँका नागरिक उपचारका लागि ३ देखि ४ घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता थियो । छाप्रेमा दुईवटा स्वास्थ्य इकाई थप गरेपछि हाल सहज भएको छ ।
यसका साथै विद्यापुरको दह सान्नेमा एउटा, तातापानीमा एउटा र लाटीकाँडामा एउटा गरी पाँच वटा स्वास्थ्य इकाई थप गरेका छौ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य इकाई नभएका वडामा गत सालदेखि स्वास्थ्यका भवन निर्माण कार्य सुरु गरेका छौं । प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यसको साथै पञ्चपुरी नगरपालिकामा एउटा एमबीबीएस डाक्टर, दुई जना स्टाफ नर्स र कोभिडको लागि पनि छुट्टै अस्पतालको व्यबस्था गर्ने तयारीमा छौं । त्यसैले अब पञ्चपुरी नगरबासीले उपचार अभावमा मर्नुपर्दैन
तपाईं नगर प्रमुख भएपछि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा के–के उपलब्धि भए ?
हामी निर्वाचित भएपछि स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएका छन् । गर्भवती तथा सुत्केरी आमालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा सहयोग पुगोस् भनेर दुई हजार रुपैयाँ सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता पालिका मार्फत व्यवस्थापन गरेका छौं । हाल नगरपालिकामा ९४ प्रतिशत महिलाहरुले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुती सेवा लिने गरेका छन् ।
बाँकी ६ प्रतिशतलाई एक दुई वर्षभित्र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने योजना छ । यसका साथै सबै वडामा स्वास्थ्य जनचेतना अभियान संञ्चालन गरेका छौं । जसमा हात धोएर खाना खाने, सुरक्षित पानी पिउने, आफुलाई रोगको संक्रमण भएको संकेत पाउनु साथै स्वास्थ्य संस्था जाने, बच्चाको तौल लिने लगाएतका जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
उसो भए सबै नागरिकले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा वडामै सहज रुपमा पाएका छन् त ?
ठुलो स्वाथ्य सेवा दिन त हामीले सकेका छैनौ । तर प्राथमिक उपचारसम्म हामीले सहज रुपमै वडामा दिएका छौं । पश्चिम क्षेत्रको बराहताल, पञ्चपुरी, चौकुनेमा कुनै षोष्ट मार्टमका केस भए भने वीरेन्द्रनगर लैजान पर्ने बाध्यता छ । बिहान, बेलुका छाक टार्न मुस्किल हुने परिवारले धेरै खर्च गरेर त्यहाँसम्म शव लैजान नसक्ने भएपछि हामीले पोष्टमार्टमका लागि बाँबियाचौरमै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौं । जसका लागि आवश्यक भवन निर्माण गरेका छौं । काम गर्ने जनशक्तिको पनि माग गरेका छौं । अब पोष्टमार्टमका लागि वीरेन्द्रनगर धाउनुपर्ने छैन ।
नगरबासीलाई कोरोना भाईरस संक्रमण हुनबाट बचाउन पालिकाले के कस्ता प्रयास ग¥यो ?
सबैभन्दा पहिले त हामी तीन तहकै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्नुपर्छ । हामी सबै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ । तबमात्रै राज्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । त्यसैले सोही अनुसार कोरोना माहामारी सुरु भएपछि हामीले काम गरेका छौं ।
पञ्चपुरी नगरपालिकामा करिब तीन हजार ६ सय नागरिक स्वदेश तथा बिदेशबाट गाउँ फर्किए । उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि १८ ठाउँमा क्वारेन्टाइन र दुई ठाउँमा आसोलेसनको व्यवस्था गरेका थियौं । नेपाल सरकालको मापदण्ड अनुसार कुनै कसर बाँकी नराखेर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा लागि परेका छौं । हरेक नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन आवश्यक पहल जारी नै छ ।
सरकारमा रहेर अतिरिक्त पैसा आर्जन गर्नु मेरो उद्देश्य होइनः पर्यटन मन्त्री ढकाल
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : लुम्बिनीको लगातार दोस्रो जित